#SaudiCables: Inona Ny Fantatsika Momba an’i Libanona Hatreto? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jona 2015 3:38 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Français, Deutsch, Español, русский, عربي, English
Pikantsarin'ny iray amin'ireo tafaporitsaka
Wikileaks dia namoaka ny Telegrama Saodiana izay miaty “telegrama mihoatra ny atsasa-tapitrisa sy antonta-kevitra hafa avy amin'ny Minisiteran'ny Raharahambahiny Saodiana ahitana ny fifandraisana miafina eo amin'ny Masoivoho Saodiana manerana izao tontolo izao.” Raha jerena ny momba an'i Libanona, ny gazety eto an-toerana Al Akhbar, izay mpiara-miombon'antoka tamin'ny Wikileaks hatramin'ny nisian'ny telegrama diplaomatikan'i Etazonia niporitsaka tamin'ny 2010, dia nitatitra ny sasantsasany tamin'ireo niteraka fahatafintohinana tao an-toerana.
Tsy misy matory ny tontolo arabo anio alina :”nilaza ny hanaporitsaka antotan-kevitra saodiana mihoatra ny dimy hetsy ny WikiLeaks”.
Ao anatin'ireo zavatra maro nipoitra tamin'ireo telegrama niporitsaka ny nataon'ny volan'i Arabia Saodita eo amin'ny sehatry ny fanaovan-gazety sy ny sehatry ny fanaovana politika libaney. Ao anatin'izany indrindra, araka ny telegrama ‘doc36598‘, i Samir Geagea, mpitarika ny Hery Libaney (LF), antoko politika kristiana iray sady ao anatin'ny Firaisankinan'ny 14 marsa, dia nandefa iraka hangataka fanohanana ara-bola avy amin'ny governemanta saodiana. Tsongaina ny tenin'i Geagea nilaza hoe “Tapaka aho. Vonona aho ny hanao izay angatahin'ny fitondram-panjaka.” Natao tamin'ny alalan'ny solontenan'ny LF ny fangatahana, dia i Elie Abou Assi, izay nitatitra “fahasahiranana ara-bolan'ny antoko sady efa tsy hahavita hiantoka intsony ny karaman'ny mpiasa ao amin'ny antoko.”
Nofehezin’ilay Libaney blaogera Ramez Dagher ao amin'ny Moulahazat tahaka izao izany:
Ity telegrama ity no porofo ara-politika fa nanampy ny tafika libaney ara-bola i Arabia Saodita. Ao ny minisitry ny raharaham-bahiny saodiana Al Faisal no miteny amintsika fa nihaona tamin'ny ambasadaoro saodiana ny olon'i Samir Geagea [antsoina hoe] Elie Abou Assi ary niteny taminy fa sahirana ara-bola ny Hery Libaney indrindra amin'ny fanoherany ireo fahavalo pro-Syriana (ny patriarka maronita sy i Aoun) ary vonona ho any Arabia Saodita i Geagea ho famahana izany olana ara-bola izany. Nilaza ihany koa ny ambasadaoro fa vonona ny hanao izay lazain'ny Fitondram-Panjaka ny Hery Libaney. Nanolokevitra ihany koa ilay minisitra hendry fa tokony asaina ihany koa ny politisiana sonita (mba tsy isian'ny ahiahy)
Taratasy tafaporitsaka hafa momba ny politika Saodiana ny “Fividianana Fahanginana“. Arakany hita antsipirihany ao amin'ny tatitra, “fomba iray ‘fanagiazana’ sy ‘fitazonana’ no voantoka amin'ny alalan'ny fividianana gazety an-jatony na an'arivony amin'ny famoaham-baovao nokinendry manokana. Dia antenaina ireo famoaham-baovao ireo avy eo hamerina ny fahalalahan-tanana ho lasa “ampahan-drenivola” ao anatin'ny teti-panorin'ny propagandin'ny Fitondram-Panjaka. Tahirin-kevitra iray manome ny lisitra mila fanavaozana mialoha ny voalohany volana janoary 2010 no manome ny antsipirihan'ireo vola nandraisana anjara ho an'ireo famoahan-gazety maherin'ny roapolo any Damaskosy, Abu Dhabi, Beirota, Koety, Amman ary Nouakchott. Ny vola nomena dia tanelanelan'ny $500 ka hatramin'ny 9750 Dinara Koesiana ($33000). Mividy ‘ampahan-drenivola’ amin'ny seha-pamoaham-baovao tokoa ny Fitondram-Panjaka, izay lasa mivadika ny lalan'ny ‘anjara zanabola’, miala any amin'ny manana petrabola mankany amin'ny sehatry ny fampitam-baovao. Ho sandan'izay dia manana ‘anjara zanabola ara-politika – famoaham-baovao mpisolelaka azy’ ny Fitondram-Panjaka.
Ao anatin'io toe-draharaha io no nahitanay (doc83763) fa nandoavola tamin'ny MTV, iray amin'ny televiziona lehibe ao Libanona ny Governemanta Saodiana. Nangataka $20 tapitrisa ny MTV saingy $5 tapitrisa no azony.
Hitanay tao ihany koa fa nisy depiote iray hafa, Boutros Harb, nangata-bola tamin'i Arabia Saodita mba hananganana antoko politika (doc32628).